Usoro ojiji & amụma nzuzo | mobilecasinofreebonus.com |
Home » The Phone Casino Bill & Mobile Ohere mepere mgbasa ozi £ 20, £ 10, £ 100, £ 1000 FREE! » Usoro ojiji & amụma nzuzo | mobilecasinofreebonus.com
Web Site Usoro na ọnọdụ nke Jiri & amụma nzuzo
Site na ịnweta a nrụọrụ weebụ, ị na-ekwere ka a agbụ ndị a na saịtị weebụ Usoro na ọnọdụ nke Jiri, niile na ọdabara iwu na ụkpụrụ, na-ekweta na ị na-ahụ maka ndaba na ihe ọ bụla na ọdabara iwu obodo. Ọ bụrụ na ị na-ekweta na ihe ọ bụla nke usoro ndị a, ị na-aju si eji ma ọ bụ ịnweta saịtị a. The ihe ẹdude ke a nrụọrụ weebụ na-echebe site nwebiisinka dị na ahia akara iwu.
2. Iji License
Ikike e nyere ikike nwa oge ibudata otu oyiri nke ihe (ọmụma ma ọ bụ software) on MobileCasinoFreeBonus.com si nrụọrụ weebụ ihe onwe onye, -abụghị nke azụmahịa anaghị adịte ikiri naanị. Nke a bụ Onyinye nke a akwụkwọ ikike, bụghị a nyefe nke aha, na n'okpuru a akwụkwọ ikike ị gaghị ama:
eji ihe maka ihe ọ bụla azụmahịa nzube, ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla na ngosipụta (azụmahịa ma ọ bụ abụghị nke azụmahịa);
agbali iji decompile ma ọ bụ weghachie njinị ọ bụla software dị on MobileCasinoFreeBonus.com si nrụọrụ weebụ;
nyefee ihe onye ọzọ ma ọ bụ “mirror” ihe ọ bụla ọzọ ihe nkesa.
Nke a akwụkwọ ikike ga-akpaghị aka chupu ma ọ bụrụ na ị na-emerụ ihe ọ bụla nke ndị a mgbochi na e nwere ike kwụsị ịdị irè MobileCasinoFreeBonus.com n'oge ọ bụla. N'elu imechi gị ikiri ndị a ihe ma ọ bụ n'elu nchupu nke a akwụkwọ ikike, ị ga-ekpochapụ ọ bụla ebudatara ihe na ihe nketa gị ma na electronic ma ọ bụ ndị e biri ebi format.
The ihe na MobileCasinoFreeBonus.com si nrụọrụ weebụ na-nyere “dị ka bụ”. MobileCasinoFreeBonus.com-eme ka mba warranties, owụt ọ bụ, ikekwe, na ugbu a disclaims na negates ọzọ nile warranties, gụnyere na-enweghị mmachi, nyere echiche warranties ma ọ bụ ọnọdụ nke merchantability, mma maka otu nzube, ma ọ bụ ndị na-abụghị ịda iwu nke ikike arịa amamihe ma ọ bụ ndị ọzọ na imebi ikike. Ọzọkwa, MobileCasinoFreeBonus.com anaghị enye ikike ma ọ bụ mee ihe ọ bụla ihe oyiyi banyere izi ezi, abụ na nsonaazụ, ma ọ bụ ntụkwasị obi nke na ojiji nke ihe na ya Internet nrụọrụ weebụ ma ọ bụ n'ụzọ metụtara ndị dị otú ahụ ihe ma ọ bụ na ọ bụla saịtị jikọrọ saịtị a.
4. -agaghị emeli
Na ọ dịghị ihe omume ga MobileCasinoFreeBonus.com ma ọ bụ ya suppliers-atụba maka ọ bụla emebi obosara (na nsonye, enweghị mmachi, emebi n'ihi ọnwụ nke data ma ọ bụ uru, ma ọ bụ n'ihi na azụmahịa nkwụsị,) ịda si eji ma ọ bụ enweghi ike iji ihe na MobileCasinoFreeBonus.com si Internet saịtị, ọbụna ma ọ bụrụ MobileCasinoFreeBonus.com ma ọ bụ a MobileCasinoFreeBonus.com ikike nnọchiteanya e amara gị ọkwa ọnụ ma ọ bụ na ide nke na o na-ndị dị otú ahụ mebiri. N'ihi na ụfọdụ meworonụ adịghị ekwe ka-agaghị emeli na echiche warranties, ma ọ bụ adịghị ike nke ibu n'ihi na ndị dị ma ọ bụ na-enwe emebi obosara, ndị a na-agaghị emeli nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
The ihe na igosi na MobileCasinoFreeBonus.com si nrụọrụ weebụ nwere ike ịgụnye oru, mperi ndenye ihe wetara, ma ọ bụ foto njehie. MobileCasinoFreeBonus.com anaghị enye ikike na bụla nke na ihe na ya nrụọrụ weebụ na ezi, zuru ezu, ma ọ bụ ugbu. MobileCasinoFreeBonus.com nwere ike ime mgbanwe ndị ihe ẹdude na ya nrụọrụ weebụ n'oge ọ bụla na-enweghị amamọkwa. MobileCasinoFreeBonus.com adịghị, Otú ọ dị, eme ka ọ bụla nkwa imelite ihe.
MobileCasinoFreeBonus.com adịghị enyocha nile nke saịtị jikọrọ ya Internet nrụọrụ weebụ na bụ bụghị maka ọdịnaya nke ọ bụla dị otú ahụ jikọrọ saịtị. Nsonye nke ọ bụla njikọ adịghị egosi mbianye site MobileCasinoFreeBonus.com nke saịtị. Jiri nke ọ bụla dị otú ahụ nwere njikọ nrụọrụ weebụ bụ na onye ọrụ ahụ ihe ize ndụ nke.
7. N'Ịntanet Okwu nke Jiri Mmezitụ
MobileCasinoFreeBonus.com nwere ike agụgharị ndị a usoro ojiji maka nrụọrụ weebụ n'oge ọ bụla na-enweghị amamọkwa. Site na iji saịtị weebụ ị na-ekwere-agbụ site na mgbe ahụ ugbu a version nke a Usoro na ọnọdụ nke Jiri.
Ọ bụla na-azọrọ metụtara MobileCasinoFreeBonus.com si nrụọrụ weebụ ga-achịkwa iwu nke State of London enweghị banyere ya megidere iwu ndokwa.
General Usoro na ọnọdụ na ọdabara Jiri nke a Web Site.
Nzuzo gị dị ezigbo mkpa ka anyị. Ntem, anyị nwere a Policy ka unu aka ịghọta otú anyị na-anakọta, ojiji, ekwurịta okwu na igosipụta na-eme ka mmadụ iji ihe ọmụma. Ndị na-esonụ kwukwara ihe anyị na iwu nzuzo.
Tupu ma ọ bụ n'oge na-achịkọta ozi nkeonwe, anyị ga-amata na nzube ya maka ihe nke ọmụma a na-anakọtara.
Anyị ga-anakọta ma jiri nke onye ozi nanị na ebumnobi nke na-emezu nzube ndị ahụ kpọmkwem site anyị na ndị ọzọ dakọtara na nzube, ma ọ bụrụ na anyị na-enweta nkwenye nke onye-echegbu ma ọ bụ dị ka achọrọ site na iwu.
Anyị ga na-ejigide ozi nkeonwe dị ka ogologo oge dị mkpa maka mmezu nke nzube ndị ahụ.
Anyị ga-anakọta ozi nkeonwe site iwu kwadoro na mma n'aka na, ebe kwesịrị ekwesị, na ihe ọmụma ma ọ bụ nkwenye nke onye-echegbu.
Personal data kwesịrị mkpa ka nzube ya maka ihe nke ọ bụ na-eji, na, ruo n'ókè dị mkpa n'ihi na ndị na nzube, kwesịrị ezi, zuru ezu, na elu na-ụbọchị.
Anyị ga-echebe onye ozi site ezi uche nche echebe megide ọnwụ ma ọ bụ na-ezu ohi, nakwa dị ka enwetaghị ikike ohere, ngosi, Iṅomi, eji ma ọ bụ mgbanwe.
Anyị ga-eme ka ngwa ngwa dị ka ndị ahịa ọmụma banyere iwu na omume anyị metụtara ndị management nke ozi nkeonwe.
Anyị na-agba mbọ iji na-eduzi anyị azụmahịa dị na ụkpụrụ ndị a n'ọrụ iji hụ na confidentiality nke onye ozi na-echebe ma na-elekọta.